एकोहोरो शङ्ख फुकेर बाँदर धपाउनुपर्ने बाध्यता ! – Nepal Japan
एकोहोरो शङ्ख फुकेर बाँदर धपाउनुपर्ने बाध्यता !
नेपाल जापान १८ कार्तिक १५:२६
बर्खाको खेती होस् वा हिउँदको तरकारी । घर छेउका जङ्गलमा बस्ने बाँदरको बथानले सधैँ विनाश मच्चाउने । खान भनेर लगाएको खेती बाँदरले बोकेर हिँडेपछि बागलुङका किसान सधैँ निराश ।